अगस्ट 27, 2021 शुभम शर्मा इराक, यात्रा, टर्की, भिसा
औपचारिक रूप मा टर्की को गणतन्त्र को रूप मा जानिन्छ, टर्की एक देश हो कि यूरोप र एशिया को चौराहा मा बस्छ। यसको राजधानी र सबैभन्दा ठूलो शहर, अंकारा, टर्की मा सबैभन्दा ठूलो शहर हो। नतिजाको रूपमा, यो ग्रीस संग सीमाहरु साझा गर्दछ
जुलाई 8, 2021 मैत्री झा इराक, यात्रा, भिसा
इराकी पासपोर्टका नागरिकहरू भिसा बिना आठ देश भ्रमण गर्न योग्य छन्। स्वालबार्ड, मलेशिया, बर्मुडा, र डोमिनिका शीर्ष देशहरू हुन्। गाइड पासपोर्ट रैंकिंग सूचकांकका अनुसार, इराकी पासपोर्ट १०107 औं स्थानमा छ। यो को रूप मा दर्जा छ
इराकमा कसरी रोजगारी पाउने?
डिसेम्बर 18, 2020 शुभम शर्मा इराक, जब
इराक विरासत, विश्व प्रसिद्ध कविहरु, चित्रकारहरु, र अरब मा सबै भन्दा राम्रो मूर्तिकार संग समृद्ध छ। यदि तपाईं इराक जाने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, पहिले तपाईंले इराकी भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने भनेर जाँच गर्नुपर्नेछ। यो पहिलो चरण हो; पछि
भारतीयहरूका लागि इराक भिसा
अक्टोबर 28, 2020 एन्टिका कुमारी भारतीय, इराक, भिसा
इराक भारतीय भिसा एक अनुमोदन हो जसले भारतीय नागरिकलाई विभिन्न उद्देश्यका लागि देशमा प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ। इराकमा प्रवेश गर्नका लागि प्रायः सबै देशका नागरिकहरूलाई अनुमति लिनु पर्छ। जे होस्, केहि अरब देशहरूमा भिसामुक्त प्रवेश छ,
इराक भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने?
सेप्टेम्बर 22, 2020 एन्टिका कुमारी इराक, भिसा
यस लेखमा तपाईले इराकी भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने भनेर जान्नु हुनेछ। व्यापार भिसा, पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिनको आवश्यकता के हो? इराकी पहुँच प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ, र कसरी
इराकमा बस्नको लागि कति खर्च हुन्छ
फेब्रुअरी 19, 2020 शुभम शर्मा आवास, इराक
इराक वा आधिकारिक रूपमा रिपब्लिक अफ इराक एशियाको पश्चिमी भागमा अवस्थित एक देश हो। बगदाद इराकको राजधानी शहर हो, यो केहि धेरै विविध जातीय समूहहरूको घर छ। इराक प्राय: जनसंख्या द्वारा
इराकमा यातायात प्रणालीको साधन
फेब्रुअरी 17, 2020 एन्टिका कुमारी नजिकिदै गर, इराक
इराकमा यातायात प्रणालीको साधनहरू धेरै सजिलो र सहज छन्। एक यसलाई लगभग सबै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। इराकीहरू हामी nafarat1 भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छन् जसले ग्यारेजहरू, ठूला ग्यारेजहरूमा भेला हुने मिनी बसहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ, जहाँ कारहरू जान्छन्
इराकमा सर्वश्रेष्ठ अस्पतालहरू
फेब्रुअरी 13, 2020 शुभम शर्मा स्वास्थ्य, इराक
पछिल्ला केही वर्षहरुमा इराकले निःशुल्क केन्द्रीकृत र विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास गरेको थियो। १ 1970 .० मा, तिनीहरूले अस्पतालमा आधारित र उपचारात्मक हेरचाहको राजधानी-गहन मोडेलको प्रयोग गर्न थाले। इराक, अन्य गरीब देशहरू जस्तो नभई सामूहिक स्वास्थ्य सेवामा ध्यान केन्द्रित गर्ने